Tape Art Dhizaini Yekuratidzira - Dhizaini magazini
Dhizaini Yekuratidzira Muna 2019, bato rinooneka remitsetse, mavara chunks, uye fluorescence yakaratidza Taipei. Yakanga iri Tepi Iyo Art Exhibition yakarongedzwa neFunDesign.tv uye Tape Iyo Inopindirana. Mapurojekiti akasiyana-siyana ane mazano uye maitiro akasarudzika akaiswa mumasereji masere ekuisa tepi uye airatidzwa zvinopfuura makumi mana tepi pendi, pamwe nemavhidhiyo ebasa revatambi vekare. Vakawedzerawo kurira kwakanaka kwazvo uye nechiedza kuti chiitiko ichi chive chakagwinyisa hunyanzvi uye zvinhu zvavakaisa zvinosanganisira matepi emachira, matepi edhisheni, mapepa emapepa, tiki dzekupfekedza, matepi epurasitiki uye maheya.
Zita rechirongwa : Tape Art, Vagadziri zita : Fundesign.tv, Izita remutengi : FunDesign.tv.
Dhizaini Yekuratidzira Fundesign.tv Tape Art